Vaovao - KALE A Share Listing in SHENZHEN
KALE A Share Listing ao amin'ny SHENZHEN
Tamin'ny 23 septambra 2021, arahabaina ho an'i Kale Fans noho ny fahombiazan'ny lisitry ny A shares ao amin'ny Shenzhen Stock Exchange!
Fanafohezana ny tahiry: KALE Shares
Ampahany : 301070
KALE FANS dia nivarotra anjara 16.18 tapitrisa amin'ny 27.55RMB isaky ny anjara. Tamin'ny 9:25 maraina tamin'ny 23 septambra 2021, niaraka tamin'ny lakolosy fanokafana mampientam-po naneno tao amin'ny efitrano fiandrasana ny Shenzhen Stock Exchange, Kale Environmental Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Ireo mpitarika ny Distrikan'i Songjiang, Shanghai, ny solontenan'ny masoivoho, ny mpiara-miombon'antoka, ny mpanatanteraka ny orinasa ary ny solontenan'ny mpiasa dia nanatrika ny lanonana lisitra an'i Kale ary nanatri-maso ny sehatra iray lehibe amin'ny fampandrosoana ny orinasa Kale.
Hoy ny filohan'i Kale Lu Xiaobo: Ny lisitry ny Kale dia dingana lehibe amin'ny tantaran'ny fampandrosoana ny orinasa. Horaisinay ity lisitra ity ho fotoana hanaraha-maso tanteraka ny lalàna. Tandremo hatrany ny fikasana tany am-boalohany dia ny "mamokatra vokatra tsara, manome serivisy kalitao" ho an'ny mpanjifantsika. Miasa mankany amin'ny vina "Fan the world, and renowned the world".
Atoa Liu Fusheng, lefitry ny governoran'ny distrika ao amin'ny Governemantan'ny Vahoaka ao amin'ny distrikan'i Shanghai Songjiang dia nanatrika ny lanonam-panokafana ny KALE FANS ary nanao lahateny: Nahomby i Kale voatanisa ao amin'ny tsenan'ny Growth Enterprise, izay dingana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny orinasa. Tsy andrinay fatratra ny handray ny lisitra ho fotoana iray hanohizana ny fampiasana ny tombony azony amin'ny sehatra hanindrona rivo-baovao sy mahery vaika ao amin'ny G60 Science and Innovation Corridor ao amin'ny Reniranon'i Yangtze Delta.
Androany dia mijoro eo amin'ny toerana fiaingana vaovao ho an'ny fampandrosoana ny KALE. Amin'ny ho avy, ny KALE FANS dia hanohy hitondra ny fampandrosoana sy ny firoboroboan'ny indostria miaraka amin'ny fampiasam-bola R&D lehibe kokoa, fanavaozana ny vokatra ary ambaratonga serivisy avo lenta, ary handray anjara amin'ny fananganana fiarahamonina maitso sy ambany karbonina.